Momba ny Aasraw Biochemical Technology Co., ltd
Aasraw Biochemical Technology Co., ltd dia naoratry ny diplaomina Ph.D dimy tao amin'ny Engineering Chemical avy ao amin'ny University of Tulsa, Oklahoma, izay ao amin'ny fonenan'i Etazonia.
Nahazo famatsiam-bola fanombohana ilay AASraw vao naorina, ary nahasarika mpahay simia kalitao ambony maromaro, ny ankamaroany dia nanasongadina indrindra ny indostrian'ny biokimia. Miaraka amin'ny famatsiam-bola mahomby voalohany, nanambola fitaovana avo lenta izahay natokana ho an'ny syntheta, fanadiovana ary famakafakana ny volan'ny vokatra. Laboratoara feno synthesis izahay, fa tsy mpivarotra fotsiny ny vokatry ny orinasa hafa. Manana fitaovana feno izahay, ao anatin'izany - calorimetry fanaovana scanner différences, chromatography ranon-javatra avo lenta, spectroscopy infrared, spectroscopy hita maso ultraviolet – sns sns. Ny fanananay raikitra dia mitentina mihoatra ny telopolo tapitrisa dolara (US).
Ankoatr'ireo tetikasa fiaraha-miasa maharitra, dia nanomana tetikasa dimy ka hatramin'ny valo taona izahay. Ny AASraw dia manana mihoatra ny zato amin'ny famokarana betsaka. Manodidina ny valopolo amin'ireto fitambarana ireto dia atolotra mivantana amin'ny mpanjifa, fa eo amin'ny roapolo eo ho eo kosa dia vita amin'ny fifanarahana amin'ny orinasa 30 orinasa mpanamboatra eran-tany.
Manaraka ny teny filamatra "Fahendrena, Finoana, fanompoana", AASraw dia manome entana manana kalitao miavaka, vidiny ambany ary fahombiazana feno hanampiana fiainana bebe kokoa eran'izao tontolo izao. Ny vokatra rehetra avy amin'ny AASraw dia atolotra amin'ny fahadiovana tsy latsaky ny 98%, ary ny rehetra dia fehezin'ny ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP na fanamarinana hafa takiana amin'ny fenitra takiana amin'ireo firenena manafatra.
Innovation no loharanom-pahefana. Miaraka amin'ny asa mafy ataon'ireo mpiasa manokan-tena rehetra, ny faharetany, ary koa ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny orinasam-pianakaviana mifandraika amin'izany, ny oniversite sy ny injeniera, AASraw dia nanatsara ny fahaiza-miasa amin'ny synthesis amin'ny farafaharatsiny 30%, izay manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny vidiny raha oharina amin'ny mpamatsy hafa manompo tsara kokoa ny mpanjifa mahatoky, ary koa ny fampihenana ny fako izay miditra amin'ny tontolo iainana.
AASraw dia miezaka ny mametraka fitsipika ho an'ny kalitao sy ny vidin'ny vidiny. Manolotra serivisim-pahamendrehana, ary mpahay simia sy teknika avo lenta isika, mba hitondra anao amin'ny tsara indrindra. Manangana fari-pahaizana vaovao vaovao ao amin'ny indostria izahay.